Maka: i-akhawunti ye-google | Martech Zone
Maka: i-akhawunti ye-google
Ngabe Futhi Ubhalisela Kanjani Ikheli Le-imeyili Lokusabalalisa le-Akhawunti yeGoogle
NgoMsombuluko, Okthoba 26, 2020 NgoMsombuluko, Okthoba 26, 2020 Douglas Karr
Lapho ngiqala ukusebenza nenkampani, ngicela ukuthi banginikeze ukufinyelela kuma-akhawunti abo e-Google ngezimvume ezigcwele. Lokhu kungenza ngikwazi ukucwaninga nokwenza kahle kuwo wonke amathuluzi wabo we-Google - kufaka phakathi i-Search Console, i-Tag Manager, i-Analytics ne-Youtube. Kaningi kunalokho, inkampani idideka kancane ukuthi ngubani ophethe i-akhawunti ye-gmail. Futhi ukusesha kuyaqala! Okokuqala, akudingeki ukuthi ubhalise ikheli le-gmail le-